Roma: guarisce il 25 Settembre nel giorno di Padre Pio, gli avevano dato pochi mesi di vita | Ilblogdellapreghiera
Rome: gwọọ ya na Septemba 25 n’ụbọchị Padre Pio, ha enyela ya ọnwa ole na ole ọ ga-ebi
Ọ bụ n’ọnwa Eprel 30, mgbe a kpọgara nke ọdụdụ nke ụmụ m isii n’ụlọ ọgwụ n’ihi ọrịa. Achọpụtara ọnụnọ nke apịtị nke 20 cm. Akụkọ ahụ wutere m, amalitere m ikpegara Saint Pius ekpere, onye m kachasị nwee ntụkwasị obi. Na May 6, nwa m nwanyị nwere ịwa ahụ, mana ndị dọkịta anaghị eme ka anyị nwee olileanya, ha nyere ya ọnwa ole na ole ọ ga-ebi.
Mgbu na obi nkoropụ buru oke ibu na naanị ebe mgbaba m bụ ekpere na ige ntị ndị Rosary na Mass dị nsọ kwa ụbọchị. Oge na-akawanye njọ ma nwekwaa nchekwube na-eji nwayọ nwayọ belata ruo mgbe Providence wepụtara: na Septemba 25 (ụbọchị ncheta San Pio) n'eziokwu na nsonaazụ Pet bụ ihe ọjọọ.
Ọgwụ nke nwa m nwanyị ahapụwo ọbụna ihe kachasị ịtụnanya na-enweghị okwu, n'aka nke ọzọ tupu ihe omimi nke Chukwu naanị ndị kwere ekwe ga-enye onwe ha nkọwa. Ìhè dị iche alọghachiwo n’iru m, nghọta kacha mgbe ị na-anọghị, na -ege m ntị ma na-enye aka emeela ka m nwee ọ joyụ na-enweghị atụ n ’obi m.
Ana m ekele Padre Pio maka ịgere ntị n’ekpere m, ana m akpọkwa onye ọ bụla ka ọ hụ ndị ọzọ n’anya, gbaghara ma nwee okwukwe n’ihi na Chineke na-ahụ ma na-enye ihe niile.
← Na post gara aga Gara aga post:Ọrụ ebube dị na Foggia, akpụ na-apụ n'anya "ahụrụ m Padre Pio ka ọ na-abanye n'ime ụlọ ma gọzie m"
Ọzọ Post → Post ozo:Medjugorje: Nwanyị anyị nyere ozi banyere Saint Francis, nke a bụ ihe o kwuru…